Sihlaziya imicu ye-FFFworld: Flexible, PETG, ABS, Metal ne-PLA | Izinsiza kusebenza zamahhala
Namuhla sikulethela okubanzi ukubuyekeza kusuka ezinhlobonhlobo ezihlanganisiwe ze imicu evela enkampanini FFFWORLD. Lo mkhiqizi we-Alavés ubelokhu ekhiqiza futhi ethuthukisa imicu yezinto ezahlukahlukene nezimpawu zobuchwepheshe kusukela ngo-2003 emakethe ekhula ngamandla.
Kulesi senzakalo ake sizame imicu ye-FFFworld: Nezimo, PETG, ABS, Metal futhi PLA. Zonke ziyimicu ehluke kakhulu komunye nomunye ezobeka ubuchwepheshe bethu nephrinta esivivinyweni ukuze kuzuzwe imiphumela emihle kakhulu.
Ukusizakala ngalokho muva nje sihlaziya iphrinta yeLegio de Leon 3D, sisebenzise leyo mishini kulokhu kubuyekeza. Ngokufaka umbhede oshisayo kanye ne- "allinmetal" extruder, kuyindlela ekahle yokugwema izinkinga nganoma iyiphi imicu. Njenge-software yokuphrinta sisebenzise i-Repetier Host.
La iwebhusayithi yomkhiqizi ine- umklamo ohlanzekile futhi enembile futhi kulula ukuzulazula kuyo ukuthola intambo ethile. Ekhasini elifanayo entweni ngayinye, umkhiqizi uchaza imininingwane yezobuchwepheshe njengokumelana nomthelela noma ukwelulwa okuphezulu.
Ngaphezu kwalokho, umenzi ube nombono omuhle wokwenza kutholakale kumakhasimende ayo ku- isigaba esizinikezele sewebhusayithi yakho Los phrinta amaphrofayli ye-CURA, SLIC3R ne-SIMPLIFY3D yayo yonke imicu yayo, kanye ne ishidi lobuchwepheshe.
Ezinye zezinto zokwakha nazo zinokubanzi incwadi yokuphrinta lapho zibhaliwe phakathi kwezinye izinto izinkinga ezivamile njengokugoqa noma ukuqhekeka futhi kwehlukile amathiphu wokuphrinta. Elinye iphuzu elihle lomkhiqizi ngokucabangela ubunzima obukhona emhlabeni womenzi wabantu bokuqala.
1 Ithula imicu ye-FFFworld: I-Flexible, i-PETG, i-ABS, i-Metal ne-PLA
1.1 Intambo ye-ABSTECH
1.2 Intambo FILAMETAL
1.3 Intambo yeplatech
1.4 Intambo ye-FLEXISMART
1.5 Intambo ye-PETGTECH
2 Iziphetho zokugcina ngemicu ye-FFFworld: Flexible, PETG, ABS, Metal ne-PLA
Ithula imicu ye-FFFworld: I-Flexible, i-PETG, i-ABS, i-Metal ne-PLA
Umenzi unaka ngokukhethekile ukuletha okokusebenza kumakhasimende akhe. Konke amakhoyili baziphendulela igcwaliswe ngomshini eduze i-silica desiccant sachet futhi a zip isikhwama ukugcina intambo ezimeni ezifanele ngenkathi ingasetshenziswa ukuze ingamunci umswakama. Amakhoyili ahanjiswa ngaphakathi kwe- amakhadibhodi aminyene Izobamba noma yimuphi umthelela ewutholayo ngesikhathi sokuhamba.
I-ABSTECH Filament enikeziwe inombala omhlophe futhi igcina ithoni efanayo nokukhanya kukho konke ukuphrinta. ngiyazi iphrinta ngokuphelele ngo-230º C, izinga lokushisa ngaphakathi kwebanga elinconywe ngumenzi. Ngesikhathi sokusetshenziswa kwayo sikuqaphele lokho akukho iphunga elingathandeki, okwenzeka nge-ABS evela kwabanye abenzi. Kokunye ukuphrinta esikwenzile izingcezu zihlukanisiwe ngenxa yezinkinga zokulwa yize sibeke kuphela umbhede oshisayo ngo-50º C esikhundleni se-100 enconywe ngumenzi.
Lokhu ngokungangabazeki yi-filament esisinikeze impi enkulu kakhulu phakathi nezivivinyo. Ine- ukungaguquguquki okuthambile kune-PLA futhi lokhu kungadala ukuthi kube nzima ukudonsa ku-extruder. Futhi ine kulula ukuncibilika ngokweqile futhi ubhajwe emqeni ngaphandle kokusebenzisa amazinga okushisa aphansi, azungeze i- I-190º C. Ngaphandle kwakho konke, sikwazile ukuphrinta izingcezu eziboniswe esithombeni ngaphandle kokusebenzisa izakhiwo zokusekela. Kuyafaneleka ukulwa isikhashana ngale ntambo, lapho ekugcineni sithola ukuphrinta sizomangala nge- ukucabanga okumangazayo ezitholakala kufayela le- izingxenye eziphrintiwe ngeyodwa nje 10% ukukhokhiswa kwezinhlayiya zensimbi.
I-PLA iyintambo lapho sonke sizizwa sikhululekile ukuphrinta, cishe ayikaze ibhekane nezinkinga zokulwa, ayivamisile ukuvinjelwa ku-extruder. Kungakho-ke besifuna ukukuhlola ngokushicilela izindawo ezinkulu eziyizicaba nezinto eziphrintiwe nge isinqumo esiphakeme kakhulu (Ama-microns angama-50). Noma kunjalo intambo yenze kahle kakhulu. Asikho isidingo sokusebenzisa umbhede oshisayo ukuthola okuhle kakhulu kuprintwa kahle kunamathele esisekelweni futhi izingqimba zihlanganiswe kahle kakhulu. Isampuli ethunyelwe umbala owodwa oluhlaza "i-apula elimuncu", i-tonality esiyithande kakhulu.
Intambo eguquguqukayo yalo mkhiqizi ithakazelisa ikakhulukazi. Igcina ukuqina kwemingcele efana neminye imicu eguquguqukayo emakethe kodwa ngokweqile kulula ukuphrinta nayo. Ngokushisa okunconyiwe kokusetshenziswa kwemvelo I-200º CSine-filament enamathela esisekelweni sokuphrinta ngamandla anele nje ukuze ingatholakali ngesikhathi sokuphrinta, kepha uma isiqedile kulula ukukhipha into kwiphrinta. Intambo nayo into eqinile kuneminye imicu evumelana nezimo esivivinye ngayo, ngalo mininingwane omncane kwenza ukuphrinta kube lula Umkhiqizi akwazi ngayo ukwandisa inani labakhipha izinto zokwakha ezihlukile elizokwazi ukwenza ukudonsa okudingekayo kulo ukuze likusebenzise ngaphandle kokugoba noma ujamu.
Yize izinto zokuhlola esizitholile zisebenzisa amakhoyili anembobo encane kakhulu emaphakathi, sikuqinisekisile kuwebhusayithi yomkhiqizi ukuthi okwamanje okokusebenza sekulethwe kusetshenziswa amakhoyili anobukhulu obujwayelekile.
Le ngenye yemicu okuvame ukuba nzima ukuyiphrinta. Le nto iyiphupho elibi lomenzi baze bayithole, ithambekela kakhulu ukugeleza kakhulu, kuthatha isikhathi eside ukuphola, izidingo amazinga okushisa aphezulu kakhulu ukuphrinta (kithi 250ºC), kukonke kulula ukuthi ingxenye enhle yento ephrintiwe iphele ebholeni bese inamathiselwe ku-extruder ngenkathi ihamba. Intambo ye-FFFworld ibonakale kithi isezingeni eliphakeme nge umbala obomvu kakhulu .
Iziphetho zokugcina ngemicu ye-FFFworld: Flexible, PETG, ABS, Metal ne-PLA
Umucu ngamunye ohluziwe ungaphezu kokuhlangabezana nokulindelwe kwethu. Futhi ngalo lonke usizo umenzi asinika lona, ​​kuzoba nezinkinga ezimbalwa esinazo ngezingxenye zethu futhi sonke sizokwazi ukuthi sizixazulula kanjani.
Lapho ngivula iphakethe ngikuthole konke kuvikelwe ngokuphelele ngisho nesikhwama esincane sikabhontshisi wejeli uyakubona lokho I-FFFWORLD inaka kakhulu ukunakekela yonke imininingwane. Unomuzwa ofanayo ngaso sonke isikhathi ngenkathi usebenzisa imikhiqizo yabo. Ukusuka ukufakwa kwesikhwama se-zip-lock ukugcina izinto, izinto okungezakho ikhoyili y Akusali nsalela lapho ijikeleza esitendini.
Imininingwane ebaluleke kakhulu ukuthi intambo ilimale kahle kanjani kwikhoyili, ayifezi nje kuphela umsebenzi wobuhle kepha futhi iqinisekisa ukukhishwa kwento eqhubekayo ngaphandle kwamafindo lokho kungaphazamisa umbono wethu.
Umenzi unekhathalogi egcinwe kahle noma kunjalo siphuthelwa intambo efanisa ukhuni neminye imicu exotic esingakuthola kweminye imikhiqizo. Siyethemba ukuthi umenzi uzokwandisa ikhathalogi yakhe kancane kancane ukuze ikwanelise ngokuphelele zonke izidingo zamakhasimende.
Ukuthandile lokhu kuhlaziywa? Ingabe uphuthelwa obunye ubufakazi obengeziwe? Ungathanda ukuthi siqhubeke nokuhlaziya imicu ehlukene emakethe? Uhlobo oluthile olukhethekile? Sizokulalela ukuphawula osishiya kukho kulesi sihloko.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Sihlaziya imicu ye-FFFworld: Flexible, PETG, ABS, Metal ne-PLA